RASMI: Antonio Cassano oo ka fariistay ciyaarida kubadda cagta – Gool FM
RASMI: Antonio Cassano oo ka fariistay ciyaarida kubadda cagta
Liibaan Fantastic October 13, 2018
(Roma) 13 Okt 2018 Weerar yahanka reer talyaani ee Antonio Cassano ayaa ku dhawaaqay inuu si rasmi ah isaga siibay kobaha kubadda cagta maalmo uun kadib markii uu tababarka la bilaabay kooxda ka ciyaarta Serie C ee Virtus Entella.
Antonio Cassano ayaa u soo ciyaaray kooxaha ugu awooda badan qaarada yurub sida Real Madrid, AC.Milan, Inter Milan, Roma, Parma iyo Sampdoria.
Cassano ayaa waayihiisa kubadda cagta ka soo bilaabay kooxda Bari 1999, wuxuuna u ciyaaray ilaa 2001, wuxuu u saftay 48 kulan, wuxuuna u dhaliyay 6-gool, wuxuuna kadib ku biiray Roma oo uu uga sii gudbay Real Madrid.
“Maalmihii la soo dhaafay waxaan ogaaday in aanan sifiican uga qayb qaadan karin tababarka maalinlaha ah sidii aan ahaan jiray” ayuu yiri Antonio Cassano.
“Haatan waxaan qabanayaa shaqooyin kale oo ka baxsan kubadda cagta, sidaas darteed waxaan go’aansaday inaan ka fariisto” ayuu sii raaciyay.
Antonio Cassano ayaa ka fariistay kubadda cagta isaga oo ah 36 jir.
Alex Sandro oo shardi adag ku xiray inuu heshiis cusub u saxiixo Juventus
Ronaldo oo dhabar jabkaan la damacsan Juventus kadib markii loo soo bandhigay heshiis uu ku noqonayo xiddiga ugu mushaarka badan adduunka!